निजी स्कुलको ठगीमा छुट ! अनलाईन कक्षाको शुल्क उठाउन अनुमति - नेपालबहस
निजी स्कुलको ठगीमा छुट ! अनलाईन कक्षाको शुल्क उठाउन अनुमति
| १४:३८:५६ मा प्रकाशित
२५ भदौ, काठमाडौं । अनलाईन कक्षाका नाममा शुल्क उठाउदै आएका निजी स्कुललाई ठगी गर्न सरकारले नै छुट दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निजी विद्यालयलाई शुल्क लिन छुट दिएका हुन् । यसअघिदेखि नै निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन थालेका थिए । तर सरोकारवालाहरुको चर्को दबाबपछि खुलेर शुल्क उठाउन पाएका थिएनन् । अहिले सरकारले नै शुल्क उठाउन भनेपछि निजी विद्यालयलाई शुल्कका नाममा ठगी गर्ने छुट मिलेको हो ।
विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो । तर स्थानीय तहले नै शुल्क भने एकिन गरेका छैनन् । सोही कारण पनि अनलाईन कक्षा देखाएर निजी स्कुलले महिनाभरीको शुल्क उठाउने योजना बनाएका छन् । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाईन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर कोरोना महामारी लम्बिएर स्कुल खोल्ने एकिन अवस्था नभएपछि शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो पूर्ववत निर्णय पुनर्विचार गर्दै निजीलाई शुल्क उठाउन दिने निर्णय गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार गएको असारदेखि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पाठनपाठन हुदै आएको छ ।